Ny Apple Pencil dia mandalo ny fitsapana fanoherana voalohany | Vaovao IPhone
Isaky ny tonga fitaovana vaovao eny an-tsena dia atao ny karazana fitsapana fanoherana rehetra. Ny malaza indrindra na izay matetika hitantsika indrindra dia ny fitsapana izay manamarina ny fanoherana ny vodin'ny front panels, ny Drop Tests na, toy ity tranga ity, a Bend Test, izay nanjary nalaza indrindra satria io ilay "biby mainty" an'ny iPhone 6. Amin'ity tranga ity, tsy misy finday na tablette aforitra, fa Apple Pencil. Hiondrika ve izany?
Araka ny voalaza ao amin'ny lohatenin'ity horonantsary ity, «aza sarotina tahaka izao ny Apple Pencil anao«. Ilay nandrakitra ilay horonan-tsary, vola izay lanin'ny Apple stylus (na dia hahazo bebe kokoa amin'ny fandraisam-peo azy aza izy), dia manao fitsapana. prying amin'ny fomba rehetra izy afaka mieritreritra sy mampihatra hery bebe kokoa. Araka ny hitanao, ny Apple Pencil dia mitazona toy ny tompon-daka saika ny fitsapana rehetra ary mampiseho fa tena sarotra ny mamaky azy. Azonao atao ny milaza fa raha tapaka izany dia minia manao izany ianao.
Ny Apple Pencil dia mahazaka fahatairana noho ny a mekanika fametahana fa manana ilay ampahany izay mampifandray azy amin'ny iPad Pro, izay misy ny mpampitohy Lightning. Misaotra an'ity mekanika ity, raha sendra misy fipoahana, ny Apple Pencil dia hiondrika amin'ny ampahany avela ho azy ary tsy hijaly. Ny zavatra mahazatra alohan'ny fikapohana tsy nahy dia miala amin'ny iPad izy ary mianjera amin'ny tany. Saingy, mazava ho azy, raha manao toa an'i Zach Straley isika amin'ny farany, izay tsy inona fa ny famoritana ny stilosy nefa tsy famoahana azy, amin'ny farany, araka ny nampoizina, dia ho tapaka ihany. Na izany aza, Apple dia nanao ny enti-modiny ary, farafaharatsiny farafaharatsiny, ny stiliny dia namboarina ho porofon-doza (fa tsy porofo masiaka…).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Ny Apple Pencil dia mandalo ny fitsapana fanoherana voalohany
azo ampiasaina amin'ny iPhone 6 plus ve ny ipencil…?
Inona ny rindranasa tokony alaina ..?
Louis V dia hoy izy:
Ny Apple Pencil dia tsy miasa afa-tsy amin'ny iPad Pro.
Valiny tamin'i Luis V
iKhalil dia hoy izy:
Nanandrana an'ity tamin'ny seranan-tsambo USB tamin'ny PC aho ary nisy zavatra mitovy amin'izany, tokony hanao fihetsiketsehana ve isika?
Ny zavamaniry vs Zombies 2 dia novaina tamin'ny ambaratonga vaovao talohan'ny tantara